China PVC Kunze Kwemadziro Hureti Plate vagadziri uye vanotengesa | Longjie
VINYL KUDZIDZA & ZVINOGONESESA
PVC Kunze Kwemadziro Yakarembera Plate iko kugadziridza kwekuvaka kwekushongedza zvinhu, PVC Kunze Wall Hanging Plate ichave akanakisa mamwe marongedzero ekunze ekunze madziro pendi uye zvedongo tile. PVC Exterior Wall Yakarembera Plate inogadzirwa nePV (PVC), iyo inokodzera mhando zhinji dzemapurani masitayera, senge villa, nzvimbo yekugara, musangano uye chivakwa chekare. PVC Exterior Wall Yakarembera Plate mitsara yakajeka, yakapfupika uye inopenya, yazvino kwazvo, ine yakanyanya mamiriro ekunze kuramba. PVC yekunze rusvingo yakaturika ndiro kuitira kuti iyo kuvaka ive nyore uye yakasikwa uye yakanaka, inogona kudzivisa marudzi ese emamiriro ekunze akashata uye ngura inodzivirira, nyore kuisa. Zvingaite mukugadzirwa kana mukugadzirwa.Zvinoitika, nharaunda haina kusvibiswa, uye kushandiswa kunowedzerwazve, yakanaka yekushongedza yezvakatipoteredza zvinhu.
PVC Kunze Kwemadziro Hanging Plate Kubatsira
1.PVC yekunze madziro akarembera ndiro kutaridzika kwehuni dhizaini dhizaini, ine yakapusa uye yakasikwa runako, akasiyana akasiyana mavara uye dhizaini dhizaini. Akateedzana ePVC madziro akaturika ndiro inogona kusanganiswa ne, inogona zvakare kusanganiswa nezvimwe zvemhando yepamusoro madziro ekushongedza, akasiyana masisitimu ezvigadzirwa senge dombo tsika, yekushongedza zvidhinha, inoshandiswa munzvimbo dzakasiyana, inofungidzira, inochinja manyorerwo musanganiswa, kusiya kwakadzama kunakidzwa kwekuona. .
2. Anti kukwegura, yakanakisa mamiriro ekunze kusagadzikana, hupenyu hwakareba hwebasa rePVV yekunze rusvingo yakarembera ndiro neanoshanda uye anoshanda kwenguva refu anti ultraviolet stabilizer ine yakasanganiswa yakakosha, anti-kukwegura, anti radiation inogona kudzivisa marudzi ese emamiriro ekunze akashata, mune akasiyana yemamiriro ekunze ekunze mhedzisiro inogona kwenguva refu senge nyowani, inodzivisa iyo yekutsvaira yemota kudururwa, besmear zvakare yakagadziridzwa uye mamwe matambudziko, ita yako kuchengetedza kamwechete uye zvachose, hupenyu hunosvika kumakore makumi matatu pamusoro.
3.zvakanaka zvemuviri zvimiro uye zvemakemikari zvivakwa zvePVC Exterior Wall Yakarembera Plate ine kuomarara kwakanaka, kukwirira kushinga kune zvinokatyamadza zvekunze, inogona kuve yakavakirwa pane akasiyana ekugadzira dhizaini uye maitiro ekuda kwekucheka zvisina tsarukano, kupfugama shanduko yechimiro, haizopwanya kutsemuka, hazvisi nyore kukwenya, asidhi uye alkali ngura uye kupisa kwemvura, kushoma kwekushisa, kudzima murazvo wemoto, kunogona kunonoka kupararira kwemoto.
4 Kuisa kuri nyore, simba rakanaka kuchengetedza, yakakwira yakazara mabhenefiti Pvc madziro ekumisikidza maitiro ari nyore uye anokurumidza, akazara akaoma mashandiro, akasimba uye akavimbika, kuchengetedza nguva nebasa, kupfupisa nguva yekuvaka, kudzikisa zvakanyanya kuisa mari. Yakarembera ndiro yemukati lining inogona kuve nyore kwazvo kuisa madziro ekuputira zvinhu, kuitira kuti kunze kwemadziro kuputira mhedzisiro kwakanakisa. Kunyanya inokodzera kushandurwa kwerusvingo rwekare, zvisinei nemadziro ekare zvidhinha kana pendi, inogona kuve yakananga mukuvakwa kwemadziro akare.
Chigadzirwa chiri mukugadzirwa kana mukugadzirwa kweinjiniya kwezvakatipoteredza hazvikonzere kusvibiswa, uye kushandiswa kunowedzerwazve, chinhu chakakodzera kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvekushongedza zvinhu.
Ate Plate mhando uye kurongedza:
Pattern muenzaniso uyu: European yakarembera ndiro,
◇ Iyi yakaenzana ndiro yakareba: mamita mana pakureba.
◇ shandisa: rusvingo kushongedza padenga uye siringi kushongedza main zvishongedzo: kutanga, J-bhawa, nyarara, zvekunze kona yekona uye kona yekoramu, cornice board, zvichingodaro.
◇ Zvese zvakabatanidzwa pamusoro zvinoshandisa iyo yekumisikidza iri nyore, kuoneka kwakarongeka, uye junction ine kusiyana kwenzvimbo kwekuwedzera uye kudzvinyirira
Iyo Kugadzira Maitiro ePVC Kunze Kwemadziro Hanging Plate
Pashure: PVC Classic Horse Fence
Zvadaro: Stainless Simbi Solar Nzira Chiedza (2-Pack)